မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::..
» Hardware များဆိုင်ရာ
Device Manager ဆိုတဲ့ အတိုင်း Device များကို ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ရာမှာ အကောင်းဆုံး Tool ပါ ဒါပေမဲ့ ကောင်းကောင်း အသုံးချ တက်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနေကြသူတိုင်း Device error messages များကို တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းတော့ တွေ့မြင်ဘူးကြမှာပါ
အဲဒါ Error Message လေးတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ ပြဿနာလေးတွေကို ဖြေရှင်း ထိန်းသိမ်းကြည့် ကြရအောင်
နေရာလေးကို သွားကြရအောင် window logo key နဲ့ F1 ကို တွဲနှိပ်လိုက်ပါ Help and Support Center ကျလာပါမယ် Fixingaproblem/Hardware and system device problems ကို သွားရောက် ပြီတော့ မိမိဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာ နဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ ဟာကို ရွေးချယ်ပြီး
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုလောက် အကြံပေးချင်ပါတယ် ကျွန်တော် ပြောချင်နေတာ တော့ ကြာပါပြီ
ဒါပေမဲ့ သိရှိပြီးသား လူများမှာပါဆိုပြီး မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ မသိသေးတဲ့
သူများအတွက် သဲတစ်ပွင့်များ ဖြစ်လေးမလား ဆိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ပါ သိပြီး သားလူများကတော့
ကျော် ဖတ်သွားကြပါ ဗျာ နော် ကျွန်တော် ပြောချင်တာ ကတော့ Help and Support Center ကို ထိရောက်အောင် အသုံးချစေချင်ပါတယ်ဗျာ သူရဲ့ အားသာချက်က E book များလို ရှင်းပြ
ရုံသာမက လိုအပ်တဲ့ tools တွေဆီကို တိုက်ရိုက် လင့်ခ် လုပ်ပေးထားလို့ အတော် လေးကို လွယ်ကူ အဆင်ပြေ ပါတယ် Help ဆိုပြီး အထင်တော့ မသေးလိုက်ပါ နဲ့ ဗျာ
တစ်ခါလောက် မွှေနှောက်ကြည့်လိုက်ပါ တကယ်အသုံးဝင်လား မ၀င်ဘူးလားဆိုတာ လက်တွေ့ကျကျ သိလာမှာပါ
အ၀ါရောင် Exclamation point လေးနဲ့ ပြသနေတာကတော့ Device မှာ ပြဿနာတစ်ခု ခု ရှိနေတယ် အငြင်းပွားစရာလေးတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါ.. အနီရောင် “X” နဲ့ပြသနေရင်တော့ အဲဒီ Device ကို Disable လုပ်ထားလို့ပါ
အပြာရောင် “ i “ လေးနဲ့ ပြနေတာကတော့ Device ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံများကို Change (or) Modify လုပ်ထားတဲ့ Information ပါ ဒီအပြာရောင် “i” လေးကတော့
General tab\_Troubleshoot ကို click လိုက်ပါ ကူညီပါရစေ( Help and support center)
ဆိုတဲ့ စာကြောင်လေးကို Check ပေး ပြီး ရှာဖွေပါတော့ဗျာ အလွယ်တစ်ကူနားလည် နိုင်တဲ့ Instructions လေးတွေ ပေးပါလိမ့်မယ် အဲဒီအတိုင်းသာ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ Ok မှ စိုပြေသွားပါမယ်
သာမန်ပြဿနာ လေးတွေကတော့ ဒီနေရာလေးမှာပဲ အဆင်ပြေ သွားတက်ပါတယ် ကျွန်တော် အခုဆွေးနွေးလိုတာကတော့ Error Message လေးတွေရဲ့ Information ကိုလိုက်ပြီး ဘယ်လို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း မှု့တွေ ပြုလုပ်မလဲဆိုတာ ပါ
ဖြစ်ပေါ်တက်တဲ့ error codes,messages တွေနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေကို လိုက်ပြီး အမှတ်စဉ် (၄၅) ခုရှိပါတယ် 1.	“ This device is not configured correctly “
ဒီ မက်ဆေ့ကို တွေ့ရပြီး ဆိုရင်တော့ Drivers ကို Hard Update wizard ကို အသုံးပြုပြီး Update သာ လုပ်လိုက်ပါ(properties\_drive\_Update driver)
3.”Thae driver for this device might be corrupt or your system may be running low on memory or other resources” My computer ကို right click လုပ် properties\_General tab\_advanced\_performance အောက် က setting ကို click ပြီး ဘာပြဿနာလဲဆိုတာ မြင်ရပါပြီ RAM နည်းနေလို့ပါ RAM ပိုမို စိုက်လိုက်ခြင်းဖြင့်
Update (or) Remove\_Add နဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် 5.”the driver for this device requestedaresource that windows does not know how to handle”
Properties\_General tab မှ Troubleshoot button ကို click ပြီး HardwareTroubleshooter ကိုသာ Run လိုက်ပါ
10.”The device either is not persent ,is not working properly,or does not have allthe drivers installed.This code may also haveamanufacturer-specific error message associated with it,depending on the device.”
12.”This device either ie not present,is not working properly,or does not have all the drivers installed.”
Detect hardware ကို click ပါ ၊ အဆင်မပြေသေးဘးဆိုရင်တော့ Remove\_Add နဲ့ကြိုးစားနိုင်ပါသေးတယ်
16. “The driver information file <name> is telling this child device to usearesource that the parent device does not have or recognize.”
အချိန်တော်တော်ကြာအောင် စောင့်လိုက်ပါဦး ပြီးရင် Device manager ကို refresh လုပ်လိုက်ပါ
Properties\_update driver လုပ်လိုက်ပါ ပေါ်လာတဲ့ button အပေါ်မှာမူတည်ပြီး လုပ်ဆောင်မှု့အဆင့် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်
Device Manager ကို ဖွင့်လိုက်ပါ IRQ တစ်ခုထဲမှာ ပဲနောက်ထပ် device တစ်ခုသုံးထားသလားဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ Device ကို Disable ပေးလိုက်ပါ တကယ်လို့များ IRQ မှာ နောက်ထပ် device တစ်ခုသုံးထားတာကို
မှု့သာ ဖြစ်ပါကြောင်း ) "Don't cry because it's over, smile because it happened."
အကို ရေ.. ကူညီပါအုံး... Window cannot open Help and Support becauseasystem service is not running.
OK Help and Support center ကို ဖွင့်ရင်... အဲဒီလို ပေါ်နေပါတယ်...ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆို တာ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပါအုံးအကို....
Help and Support Center ကို သွားတာက ကျွန်တော် သ်ိသလောက် ကတော့ ၃ နည်းရှိပါတယ်
၁။ Start Menu ၂။ window logo + F1
၃။ မည့်သည့် foldr မှာမဆို menu bar က Help ဆိုပြီး ရှိပါတယ် အဲဒီနည်းတွေနဲ့ ပြောင်းပြီး ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါ
အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင် တော့ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ ဖြေရှုင်းလိုက်တဲ့ နည်းလေးကို ပြောပြမယ်နော်
ကြံရာမရတာနဲ့ အောက်ပါနည်းလေးနဲ့ ဖြေရှုင်းလိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါတယ် ၁။Run မှာ msconfig လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်
၂။General tab \_startup selection အောက် က Normal setup-load all device drivers and services ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို check ပေးပါ
၃။Boot.INI tab \_Boot Options အောက် က safe boot ကို check ပေးပြီး
Restart ပေးလိုက်ပါ အဆင်ပြေပါစေ ဗျာ
နိုင်ငံအလံ: ကျေးဇူးတင်စကား: 2
hardware howto, hardware knowledge «
28-07-2008 03:10 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 11:00 AM
မြန်မာပြန်မူပိုင်ခွင့် ©2007, မြန်မာမိသားစု မှဖြစ်ပါသည်။
မူပိုင်ဆော့ဖ်ဝဲ vBulletin® Version 3.8.0 မှဖြစ်ပြီးမူပိုင်ခွင့် ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd ဖြစ်ပါသည်။